မီးငယ်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: March 2010
ခြင်မေမေ "ဟင်း... ဖေဖေက သားနဲ့အတူ စတိတ်ရှိုးသွားကြည့်တာ မဟုတ်လား!"
Posted by မီးငယ် at 3:35 PM2comments
သခွါးသီး အသဲကွဲပြီး ငိုနေတယ်။ ခရမ်းသီးက ဘေးကနေပြီး နှစ်သိမ့်နေတယ်။
Posted by မီးငယ် at 3:34 PM0comments
ဖက်ထုပ်လေးနှစ်ထုပ် မင်္ဂလာဆောင်တယ်။ သတို့သားဖက်ထုပ်က ဧည့်သည်တွေကို
"ဟင့်... သူများ အင်္ကျီချွတ်လိုက်တာနဲ့ သူများကို မမှတ်မိတော့ဘူးလားတဲ့!"
Posted by မီးငယ် at 3:33 PM0comments
မီးငယ် မေလ ၁၂ ရက်နေ့မှာပဲ ဂျပန်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အိမ်မှာတော့ မိသားစုက မိတ်ဆွေတယောက် အိမ်မှာ ခိုကပ်နေရတဲ့ ဘ၀နဲ့ မီးငယ်ထားခဲ့ရတာပါ။ ဦးလေးကလည်း ဆေးရုံပေါ်မှာ သွေးပုလင်းတန်းလန်းနဲ့ မီးငယ် လေဆိပ်ဆင်းခါနီး သွားကန်တော့တော့ သူတာဝန်ကျေအောင် မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး သမီးလေးရယ်လို့ တခွန်းပဲ ပြောပြီး မျက်ရည်ကျရှာတယ်။
တကယ်တော့ ကျေးဇူးတရားတွေ ဆပ်လို့ မကုန်နိုင်တဲ့ မီးငယ်ရဲ့ ကျေးဇူး ရှင်ထဲမှာ ဦးလေးလည်း ရှေ့ဆုံးကပါပဲ။ ဦးလေးလို့သာပြောတာ ဘယ်သူကမှ ဦးလေးလို့မသိပါဘူး။ ဦးလေးလို့သိတဲ့သူ နည်းပါတယ်။ ကလေးသေးသေး လေးဘ၀ထဲက ရုံးကိုလိုက်သွားတယ် ဘယ်သူ့သမီးပါလို့ပြောတတ်တဲ့ မီးငယ်ကြောင့် အားလုံးက သားတယောက် သမီးတယောက်ရှိတဲ့သူလို့ပဲ သိကြပါတယ်။ နောက်မှပဲ ဒီအကြောင်းတွေ ဆက်ရေးပါမယ်လေ။
ဒီလိုနဲ့ပဲ မီးငယ် လေဆိပ်ဆင်းခဲ့ရပြီပေါ့။ မိသားစုကို နောက်ဆံမတင်းဖို့ တဖွဖွမှာနေရှာတဲ့ မေမေတို့ကို ကြည့်ရင်း မီးငယ် တချက်တောင် မျက်ရည်မကျအောင် ထိန်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်ကို ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ထိန်းထားသမျှ သွန်ချမိပြီပေါ့။ ပထမဦးဆုံးမိဘကို ခွဲရတဲ့ ခရီးဖြစ်ပေမယ့် အဲ့ဒီ ခံစားချက်ထက် မိသားစုကို စိတ်ပူနေတဲ့ ခံစားချက်က ပိုနေပါတယ်။
နေစရာမရှိတော့တဲ့ မိသားစု.. သွေးပုလင်းတန်းလန်းနဲ့ ဆေးရုံပေါ်က ဦးလေး .. တလှည့်စီ မြင်ယောင်ရင်း မီးငယ် ရင်ပူရတဲ့ နေ့ရက်တွေကို ဖြတ်သန်းရပါတယ်။ ရှေးက ကုသိုလ်လို့ပဲ ပြောရမလား။ မီးငယ်ရဲ့ ဆုတောင်းတွေကပဲ ပြည့်သလားမသိပါဘူး။ တလလောက် ဆေးရုံကို တက်ပြီးတဲ့ နောက် ဦးလေး ကျန်းမာစွာနဲ့ ပြန်ဆင်းလာပါတော့တယ်။ အပြည့်အ၀ကျန်းမာတာကြီးလည်း မဟုတ်သေးလို့ ပြန်လည်ကုသမှုကတော့ တပတ်တခါ ခံယူရတုန်းပါပဲ။ မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက်တောင် ပြန်ရုန်းကန် ရမယ့် အခြေအနေမှာ လူမမာ တယောက် အိမ်မှာ ရှိနေတော့ တော်တော်လေးကို ကြပ်တည်းခဲ့ရပေမယ့် မီးငယ် ရဲ့ အထိုက်အလျောက် ပြန်လည် ကျေးဇူးဆပ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် မိသားစု ပြန်အခြေကျလုနီးပါးဖြစ်လာခဲ့ရပါပြီ။
မီးငယ် ဒီနှစ် မေလမှာ ဂျပန်ရောက်တာ ၂နှစ်ပြည့်မယ်ပေါ့လေ။ အခက်အခဲကြုံတိုင်း မိဘကို ပြန်လည်လုပ်ကျွေး နိုင်တဲ့ သမီးကောင်းလေး ဖြစ်ပါစေလို့ အမြဲ ဆုတောင်းပါတယ်။ ပြည့်စုံတဲ့ မိသားစု မဟုတ်ရတဲ့ကြားထဲမှာမှ နာဂစ်ကြောင့် နာလန်မထူနိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရတာမို့ ဘ၀ကုသိုလ်ကံများပါခဲ့ရင်ပေါ့လေ .. မိသားစု ပျော်ရွှင် အေးချမ်းရတဲ့ဘ၀လေး တနေ့တော့ ရောက်လာဦးမှာပါလို့ အားတင်းရင်းနဲ့ပဲ ..
Posted by မီးငယ် at 9:59 AM3comments
မီးငယ် ဂျပန်လာဖို့အတွက်ကို ၂၀၀၈ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ တကယ်တမ်းဗီဇာတွေစလုပ်ပြီး အတိအကျသတ်မှတ်ခံရတာက မတ်လထဲမှာပေါ့လေ။ ဧပြီ ၁ရက်နေ့မှာ ၀န်ထမ်းသစ်ခန့်အပ်ပွဲကို တက်ရောက်ဖို့ အတွက် ရက်သတ်မှတ်ပြီး လေယာဉ်လက်မှတ်ပါ စီစဉ်ပြီးကာမှ ဗီဇာက ကြန့်ကြာနေပြန်ပါတယ်။ ဗီဇာနဲ့ အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် မေလထဲမှာ မှ သွားဖို့ရန်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ သွားရတော့ပါမယ်ဆိုမှ အခက်အခဲက စတွေ့ရပြန်ပေါ့။
၂၀၀၈ခုနှစ် မေလ၂ရက်နေ့ ရန်ကုန်ရုံးခွဲမှာ ရုံးတက်နေရင်းနဲ့ မုန်တိုင်းသတင်းကို တောက်လျှောက်ကြားနေခဲ့ရပါတယ်။ တနေကုန်မိုးရိပ်တွေမြင်ပြီး မိုးတွေသည်းနေခဲ့ပေမယ့် ဂျပန်တွေပီပီ မကြောက်ကြပါဘူး။ မီးငယ်လည်း မုန်တိုင်းသတင်းကို တောက်လျှောက်သတင်းပို့ပေးနေခဲ့တာတောင် သူတို့က ကြုံနေကြပါဆိုတဲ့ ရုပ်တွေနဲ့ အေးဆေးပါတဲ့လေ ဆက်တိုက်ပဲ ဘယ်ဒေသမှာတော့ ပြိုကုန်ပြီ။ မြို့လိုက်ပျက်ကုန်ပြီ နဲ့ ကြားနေရလို့ ၀န်ထမ်းတွေစပြီး ကြောက်လာကြပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ရန်ကုန်သတင်းတော့ ပါမလာသေးတာမို့ စိတ်ပူရုံကလွဲလို့ သိပ်တော့ မဖြစ်ကြပါဘူး။ တခါမှ မကြုံဖူးသေးတာလည်း ပါတာပေါ့လေ။ မိဘတွေဆီလည်း ဖုန်းဆက်ထားကြတာ လောက်ပါပဲ။ ရန်ကုန်ကိုလည်း ဖြတ်မယ် ကြားတယ်ပေါ့လေ။ မေလ၂ရက်နေ့ ညမှာပဲ ၀န်ထမ်းတွေပါတီက ရှိပါသေးတယ်။ အားလုံးမဟုတ်ပေမယ့် လူ၃၀လောက်စုလုပ်ရမယ့် ပါတီပွဲပါ။ ရွေးခံထားရတဲ့သူတွေကလည်း မတက်မနေရဆိုတော့ အားလုံးတက်ကြရမှာပါ။ မိုးတွေသည်းနေတော့ သိပ်မသွားချင်ပေမယ့် ရုံးကိစ္စဆိုတော့ သွားရပြန်ပြီပေါ့လေ။
ည၈နာရီခွဲလောက်မှာ မိုးက ပြင်းပြင်းထန်ထန် သည်းလာသလို လေတွေပါ စတိုက်လာပါတယ်။ အော် .. ဒါမုန်တိုင်းပါလာပေါ့. ဒီလောက်ပါပဲ။ တခါမှ မကြုံဖူးလို့ နည်းနည်း ထူးဆန်းနေတာလောက်ပါပဲ။ ဒါနဲ့ပဲ ည၁၀နာရီခွဲလောက် အိမ်ပြန်ရောက်ပါတယ်။ မီးငယ်နေတာက ၈လွှာရဲ့ အပေါ်ဆုံးထပ်မှာမို့ သာမန် မိုးရွာရင်တောင် မိုးကယိုလေ့ရှိပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ ပြန်ပြင်ပြင် ခေါင်မိုးပေါ်ကို စလောင်းတက်ပြင်တဲ့သူတွေရဲ့ ခြေရာကြောင့် ယိုတာပါပဲ။ မိုးယိုနေတာကို လိုက်သုတ်နေတဲ့ မေမေ့ကို ဖယ်ခိုင်းပြီး မီးငယ် လုံချည်တိုတိုဝတ်လို့ ရေသုတ်ရပါတော့တယ်။ မသုတ်ဘဲ အ၀တ်တွေနဲ့ ရေတားရင်လည်း အိမ်ထဲထိ စီးတာမို့ ရေသုတ်စက်နဲ့ မလုပ်လို့ကို မရတာပါ။ လက်နဲ့အ၀တ်နဲ့စုပ်ပြိး ညှစ်ရတာလည်း ကူရပါတယ်။ အေးနေပေမယ့် ပုံမှန်ထက်ကို ရွာနေတဲ့မိုးကြောင့် တညလုံးကို မအိပ်ရပါဘူး။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သဲရာကနေ စဲလာပေမယ့် ကောင်းကင်ကြီးက ရဲတောက်နေတာပါပဲ။ အဘွားကတော့ ကြည့်ပြီး ပြောတယ် လေထန်ဦးမှာတဲ့လေ။ မနက်မိုးလင်းခါနီးမှာမှေးခနဲအိပ်ပျော်သွားပေမယ့် ၅နာရီခွဲလောက်မှာ ခေါင်မိုးက အိကနဲ ဖြစ်လာပါတယ်။ အရမ်းလန့်သွားကြတာပေါ့။ ရေကလည်းဘယ်လောက်သုတ်သုတ် မနိုင်တဲ့ အနေအထားဖြစ်လာပါတယ် :( အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ မေမေက နောက်ဖေးခနသွားချင်တယ်တဲ့လေ။ တရေးနိုး အပေါ့ထသွားတာပါ။ မေမေလည်း နောက်ဖေးရောက်ရော ၀ုန်းဆို အသံကြီးကြားလိုက်ရပါတယ်။ :O
မေမေရေ ဆိုပြီး အော်ပြီးပြေးလိုက်တာ မေမေက လေတွေအရမ်းတိုက်နေလို့တဲ့လေ နောက်ဖေးခန်းနဲ့ အိမ်လယ်ခန်း ခြားထားတဲ့ တံခါးကို ချက်ချသွားပြန်တယ် :O မေမေ့ကိုလည်း ခေါ်မရ မိုးတွေကလည်း ပြန်သည်းလာနဲ့ မီးငယ်တို့အိမ် ငရဲပွက်နေသလိုပါပဲ။ :( မေမေရေ မေမေရေ နဲ့ ဒုန်းဒုန်း ဆိုထုနေတုန်း အိမ်ရှေ့ခန်းမှာလည်း အမိုးက အိကနဲ ဖြစ်လာတာတွေ့လိုက်တာမို့ အရင်ဆုံး အဘွားကို ဆင်းပြေးခိုင်းရပါတော့တယ်။ အကိုကို အဘွားကို လက်ဆွဲလို့ ဆင်းပြေးတော့လို့ အော်လိုက်ပြီး မေမေ့ကို အော်ခေါ်နေရပြန်တာပေါ့။ အိမ်မှာမိသားစု အကုန်မှ ၅ ယောက်ထဲရယ်လေ။ :( ၁၅ မိနစ်လောက်အကြာမှာ မေမေထွက်လာပါတယ်။ အရမ်းကိုလန့်သွား တာက နောက်ဖေးမီးဖိုချောင်တခုလုံး လုံးဝမရှိတော့ဘဲ မေမေတယောက်ထဲ အန္တရယ်ကင်းကင်း ပြန်ထွက်လာ နိုင်တာပါပဲ။
အိမ်သာခန်းလေးတခုပဲ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ကွက်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ အမိုးတွေရော မီးဖိုချောင်ပစ္စည်းတွေ ရော နံရံတခြမ်းရော လေနဲ့ပါသွားခဲ့ပါပြီ :( မေမေ ပြန်ထွက်လာနိုင်မှပဲ ဟင်းချပြီး ငိုဖို့တောင် သတိမရ မေမေရေ ပြေးတော့လို့ပဲ အော်နိုင်ပါတယ်။ အဘွားကို အောက်ထပ်သွားပို့ ပြီး ပြန်လာတဲ့ အကိုရယ်၊ ပစ္စည်းတွေ ရသလောက် သိမ်းနေတဲ့ ဦးလေးရယ်က သတိတရနဲ့ မီးငယ်လေယာဉ်လက်မှတ်လို့ အော်ပြီး ပြေးယူရပြန်ပါတယ်။ ( ရုံးက၀ယ်ပေးထားတဲ့ လက်မှတ်မို့ နောက်တခေါက်လည်း ပြန်ဝယ်နိုင်တဲ့ အနေအထား မရှိဘူးလေ ) အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ခေါင်မိုးကနေ တဖဲ့ဖဲ့နဲ့ ပြုတ်ကျလာနေပါပြီ။
မီးငယ် သွားဖို့ပဲ ရှိတော့တာမို့ လက်ဂေ့ခ်ျလည်း အဆင်သင့်ပြင်ပြီးသားပါ။ လပ်ဂေ့ခ်ျရယ် လေယာဉ်လက်မှတ်ရယ်ကို ဆွဲလို့ အကိုက ရှေ့ကနေပြေးဆင်းပါတယ်။ ၈ ထပ်ရဲ့ဘ၀ကလည်း မလွယ်ပါ့လားနော် :( ဦးလေးက ပစ္စည်းတွေသိမ်းနေရင်းနဲ့ နှစ်ခါ ၃ ခါချော်လဲပြီး ဖြူလျော်နေပါပြီ။ :( လူတွေ ဘေးကင်းရင်တော်ပြီဆိုတဲ့ ခံစားချက်လေးနဲ့ အခန်းကို လှည့်ကိုမကြည့်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ပဲ အောက်ထပ်က မိတ်ဆွေတွေဆီကို သွားကပ်နေရတဲ့ဘ၀ရောက်ပါ　တော့တယ် :( တီဗွီက အစ ကွဲသွားတာမို့ မီးငယ်တို့ ဘ၀ အခြေပျက်တာပါပဲ။ နာဂစ်နဲ့ ဒီလောက်နဲ့တင်ပြီး　မလားမှတ်ပါတယ်။ ဦးလေးရဲ့ အခြေအနေက တစတစ ဆိုးဝါးလာပြီး အားငယ်နေပုံလည်းရတာမို့ အဖျားတွေ　လည်း တက်နေပါပြီ :( ဘယ်လိုမှ မရတော့တဲ့ အခြေအနေမို့၎ရက်မြောက်နေ့မှာ ဆေးရုံတင်ရပါတော့တယ်။
သွေးအားချင်းလိုတယ်လို့ ပြောတာနဲ့ မီးငယ်တို့ သွေးရှာထွက်ရပြန်ပြီပေါ့။ နာဂစ်ကြောင့် ဒဏ်ရာရတဲ့သူ တော်တော်များတာမို့ သွေးက လိုချင်သလို ရှာမရခဲ့ပါဘူး။ ရပ်ကွက်တကာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတကာ အလှုခံထွက်ရပြန်ပါတယ်။ မီးငယ်က အေဘီ သွေးမို့ လိုတဲ့သူရှိရင်လည်း လှုပါ့မယ်လို့ ပြောရင်း နောက်ဆုံး ဦးလေး ရုံးက ၀န်ထမ်းတွေရောက်လာတော့ သွေးနှစ်ပုလင်း အဆင်ပြေသွားခဲ့ပါတယ်။ :( တရက်စာတော့ အဆင်ပြေပြန်ပြီပေါ့လေ။ နေ့တိုင်းသွင်းရမှာဆို တော့ မီးငယ်လည်း နီးစပ်ရာ သူငယ်ချင်းတွေဆီပြေးရင်း　လွှားရင်း မီးငယ်ရဲ့ရုံးက ၀န်ထမ်းတွေလည်း ရောက်လာကြပါတယ်။ လိုရင်လှုပါ့မယ်တဲ့ ။ အေသွေးမို့ အေဘီသွေးလောက် ရှာရမခက်တာတောင် နာဂစ်ကြောင့် တော်တော်လေး ခက်ခဲရတာပါပဲ။ စိတ်ဓာတ်တွေ လည်း ကျလို့ အားငယ်နေရတဲ့ရက်တွေကို ဖြတ်သန်းရတော့တာပေါ့။
နေစရာနေရာကမရှိ ၊ အစားအသောက်ကျပြန်တော့လည်း ဈေးတွေက တအားကြီး ( ကြက်ဥတလုံး ၅၀၀ တဲ့ကွယ် - လူတွေရဲ့ မတော်လောဘတက်ပုံများ ) မီးငယ်လည်း ထမင်းတောင်ရဲရဲ မစားရဲပါဘူး။ အိမ်မှာ ကိုယ်က အငယ်ဆုံးလေ :( အဘွားရှိတာမို့ အစစအရာရာ အဘွားအတွက်ပဲ စဉ်းစားရင်း ဆေးရုံတက်နေတဲ့ လူမမာ အားမငယ်စေရေး မီးငယ်ပဲ ကြိုးစားရပြန်ပါတယ်။ အကိုကလည်း တမိသားစုလုံးအတွက် မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်လို့ အစစ အရာရာ လိုက်လုပ်ပေးပေမယ့် မီးငယ်လည်း ဘယ်လိုမှ ထိုင်နေလို့မရဘဲ ကြိုးစားရပြန်ပါတယ်။
ရုံးက မီးငယ်ရဲ့ သူဌေး ( တကယ့်ကို မိဘလိုပဲမို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ) က အိမ်လိုက်လာပြီး လာကြည့်သွားပါတယ်။ မီးငယ်ကလည်း သွားရတော့မယ့်ရက်က သိပ်ကပ်နေပြီလေ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ မီးငယ် စိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်း မျက်ကွင်း ဟောက်ပက်နဲ့ မေလ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ဂျပန်ကို လာခဲ့ရပါတော့တယ်။ လာတဲ့အချိန်မှာ ဦးလေးကလည်း ဆေးရုံပေါ်မှာပဲ ရှိသေးတာမို့ နေ့တိုင်း မျက်ရည်နဲ့ မျက်ခွက်ဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့လေ။ နောက်ပိုင်း ဆက်ဖြစ်တာတွေတော့ နောက်ပို့စ်တွေမှပဲ တင်ပါတော့မယ်။
Posted by မီးငယ် at 12:38 PM5comments
Posted by မီးငယ် at 10:49 AM2comments
Posted by မီးငယ် at 10:38 AM 1 comments
မီးငယ်တို့ ဂျပန်စရောက်ထဲက အလုပ်တွေများတာရယ်၊ ကိုယ်လုပ်ချင်လို့ကို လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုအကြောင်း ပြတာရယ်နဲ့ စာမကြည့်ဖြစ်ပါဘူး။ ( အပျင်းကြီးနေတာလည်း ပါတာပေါ့လေ ) အခုတော့ မီးငယ် စာကြည့်မှကို ဖြစ်တော့မှာပါ.။ :( စာမေးပွဲ က ဇူလိုင်လမှာ ဖြေရဦးမယ်။ ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ လယ်ဗယ် ၃ ပဲ ဖြေလာခဲ့ရတာပါ။ အမှတ်လည်း မနည်းမများနဲ့ အောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၇ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ပထမပတ်မှာဖြေပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ် မတ်လထဲမှာ အောင်လက်မှတ်ကို ရခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၈ခုနှစ် မတ်လထဲမှာပဲ ဂျပန်လာဖို့ကို ရွေးချယ်ခံရပါတယ်။ မီးငယ်လည်း ဂျပန်စာစာမေးပွဲ လယ်ဗယ်၃ အဆင့်နဲ့ ဒီကိုလာရတော့ လယ်ဗယ်၂ နဲ့လယ်ဗယ်၁ စာတွေဆိုတာ ဘယ်နေမှန်းတောင်မသိပါဘူး ။ ဖြေလည်း မဖြေဖူးပါဘူး။ :( နိုင်ငံခြားဘာသာသင်တက္ကသိုလ်ရဲ့ ဒီပလိုမာ တတိယနှစ်ကျောင်းသူဆိုတာလေးတော့ ရှိတာပေါ့လေ :D သင်တန်းဆိုတာဝေးလို့ မေးခွန်းပုံစံတောင် သေချာမသိတဲ့ဘ၀နဲ့ မီးငယ်တို့ ရောက်ရောက်ချင်းနှစ် ၂၀၀၈ခုနှစ်ရဲ့ ဒီဇင်ဘာမှာ လယ်ဗယ်၂ ကို ၀င်ဖြေဖြစ်ပါတယ်။ ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ အမှတ်လည်း သိပ်မကောင်းလှပါဘူး။ ၂၆၉ မှတ်ပဲ ရပါတယ်။ တခါထဲနဲ့ အောင်တယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နည်းနည်းတော့ မာန်တက်သွားတာပေါ့လေ :D ငါကွပေါ့ .. ခိခိ
မီးငယ်တို့ ကိုယ့်ဘာသာ အင်တာနက်မှာ ရှာဖွေလေ့လာ ပြီး စာကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါတောင် အသေအချာ ကြည့်နိုင်ခဲ့တယ် မဟုတ်ပါဘူး။ စာကြည့်ချိန် သိပ်မရှိဘဲ လယ်ဗယ် ၂ ကိုအောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ ယုံကြည်မှုလေးတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ မီးငယ် လယ်ဗယ် ၁ ဖြေဖို့ကိုဖြစ်လာပါရော :D ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာမှာ ၀င်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း တစ်နှစ်လုံး အလုပ်ကို အကြောင်းပြလို့ စာသေချာမကြည့်ခဲ့တော့ ကျပြီပေါ့ ( ခွေးကျဝက်ကျ ) အဟီး ..။
အခုလည်း အောင်စာရင်းထွက်လို့ တလကျော် နှစ်လထဲကို ရောက်လာပါပြီ။ ဘာစာမှ မကြည့်ဖြစ်သေးတာမို့ မီးငယ် စာကြည့်ရပါတော့မယ်။ ဇူလိုင်လ ပထမပတ်မှာ ဖြေရမှာမို့ပါ။ ခက်လိုက်တဲ့ မိုဂျိ ( စကားလုံး ) တွေ။ အလုပ်နဲ့ ပတ်သတ်တာရယ်။ ပြင်ပစကားရယ်လောက်ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ( ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်တာပဲ :D ) ပြောနေနိုင်ပြီဖြစ်တော့လည်း မီးငယ် အပျင်းကြီးပြီး ( လယ်ဗယ် ၂ အောင်သွားခဲ့တာ လည်း ပါမယ်ထင်တာပဲ။ )
ဘာစာမှ သေချာမကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ တကယ်ပြောရရင် တော်တော်ပျင်းတဲ့ ကလေးလေးလို့တော့ မေမေက ခေါ်တယ်။ အမြဲတမ်းပဲ :D
ဥာဏ်ကလေးကို အားကိုးလို့ အမြဲတမ်း ငပျင်းလေး လုပ်နေတဲ့ မီးငယ် တခါမှ မကျဖူးတဲ့ စာမေးပွဲကို မကျစဖူး အကျထူးတော့ စာကြည့်ရပါတော့မယ်.။ အဲ့ . ထူးခြားတာတခုက မီးငယ် လယ်ဗယ် ၂ တုန်းက ရတဲ့ အမှတ်အတိုင်းပဲ ပြန်ရတာပါပဲ ( အောင်မှတ်က လယ်ဗယ် ၂ မှာ ၂၄၀ ဆိုအောင်ပြီး လယ်ဗယ်၁မှာ ၂၈၀ ဖြစ်သွားလို့ပါ ) ၂၆၉ ရထားပေမယ့် ဘယ်နေရာမှာ အားနည်းလည်း ပြန်ကြည့်တော့ မိုဂျိဂေါ်အိလို့ ခေါ်တဲ့ စကားလုံးတွေ ဖြေရတဲ့နေရာမှာ နည်းသွားတာပါ။ အရင်တုန်းက စာတွေများတော့ မီးငယ် မရှက်တမ်း ၀န်ခံရရင် စာမေးပွဲမှာ ခေါင်းမူးတဲ့ထိ စဉ်းစားတာတောင် မသိတာတွေများလို့ နံကြားထောက်ခဲ့ရတာတွေ အများကြီးပါပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျတာပေါ့လေ.။
အဲ့လို .. အဲ့လို စတဲ့ အကြောင်း ကြောင်းတွေကြောင့် မီးငယ် စာကြည့်ရပါပြီ။ စာကြည့်ရင်းနဲ့လည်း ပို့စ်တွေ တင်မယ် စိတ်ကူးထားပါတယ်.။ မီးငယ် စိတ်ထဲ ရှိတာတွေ ရေးနေတာမို့ လည်လည်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ စိတ်မကျေနပ်စရာ ရှိရင် မီးငယ်ကို ခွင့်လွှတ်ကြပါ :)
Posted by မီးငယ် at 12:45 AM2comments
ကျွန်တော့်ရဲ့အမေမှာ မျက်လုံးတဖက်ထဲပါတယ်။ ကျွန်တော်သူ့ကိုသိပ်မုန်းတာပဲ။ ဘယ်လိုမှကို လူတောမတိုးဘူးလေ။ သူမက ကျောင်းက ဆရာတွေ ကျောင်းသားတွေအတွက် ချက်ပြုတ်ပေးရတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။ မိသားစုအတွက်ကို တဖက်တလမ်းက အထောက်အကူပြုဖို့ အတွက်ပေါ့။
တနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်တက်နေတဲ့ မူလတန်းကျောင်းလေးကိုအမေလိုက်လာခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ကိုအားလုံးက ၀ိုင်းလှောင်ကြတော့တာပေါ့။
အာ... သူမကျွန်တော့်ကို ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာပါလိမ့်. အရှက်ရအောင်လုပ်လိုက်တာလား။
ကျွန်တော်သူမကိုလျစ်လျူရှုပစ်လိုက်တယ်။သူမကို ကျွန်တော်မုန်းတီးတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ ကြည့်လိုက်ပြီး ပြေးထွက်သွားခဲ့တယ်။
နောက်တနေ့မှာတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အတန်းဖော်တယောက်က လာပြောပါတော့တယ်..
ဟေ့ကောင်.. မင်းအမေက မျက်လုံးတဖက်ထဲ ပါတာလားကွ။
ကျွန်တော်အမေ့ကို အဲ့ဒီနေ့မှာပဲ ရင်ဆိုင်ပြီး ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။
အမေကျွန်တော့်ကို အများရဲ့ကြားထဲလူရီစရာဖြစ်အောင်လုပ်တာ သက်သက်ဖြစ်နေပြီ။ အမေဘာလို့ မသေသေးတာလဲ၊
ကျွန်တော်ဘာပြောလိုက်တယ်ဆိုတာကို တစက္ကန့်လောက်လေးတောင် ရပ်ပြီး မစဉ်းစားနိုင်လောက်အောင် ဒေါသတွေထွက်နေခဲ့တယ်။
ကျွန်တော် အိမ်ထဲကနေ ထွက်သွားချင်တဲ့ခံစားချက်တွေပဲ ပြည့်နှက်လို့နေခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော် အပြင်းအထန်ကြိုးစားပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံကို သွားရောက်လို့ ပညာသင်ဖို့ အခွင့်အရေးကို ရရှိခဲ့ပါတော့တယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ကျွန်တော်လက်ထပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ်ပိုင်အိမ်လည်း ၀ယ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ကျွန်တော့်သားသမီးတွေရယ် ဇနီးရယ်နဲ့ သိပ်ကိုပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းတဲ့ဘ၀လေးတခုကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။
အဲ့ဒီနောက် တနေ့မှာတော့ အမေက ကျွန်တော်တို့ဆီလာလည်ခဲ့ပါတယ်။ သူကျွန်တော်နဲ့မတွေ့ရတာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီလေ။ သူ့မြေးလေးတွေဆို တွေ့ရဖို့ဆိုတာ ဝေးရောပေါ့။ တခါမှတောင် မတွေ့ဖူးသေးပါဘူး။
သူမကျွန်တော်တို့အိမ်ရှေ့ကိုရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ကျွန်တော့်ကလေးတွေကို ရယ်မောလှောင်ပြောင်ကြပါ တော့တယ်။
ကျွန်တော်သူမကို အပြင်းအထန် ကြိမ်းမောင်းလိုက်တယ်။
ခင်များကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုဘာလာလုပ်တာလဲ. ကျွန်တော့်ကလေးတွေကိုရော ဘာလို့လာကြည့်ပြန်တာလဲ။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ အမေက တိုးတိုးလေးပဲ ပြန်ပြောတယ်။
အို. လူလေး အမေတောင်းပန်ပါတယ်။ အိပ်လိမ်စာမှားသွားတာပါ။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ပျောက်ချင်းမလှ ပျောက်သွားပါတော့တယ်။
တနေ့မှာ .... ကျွန်တော့်ရဲ့အိမ်ကို ကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့ မိတ်ဆုံစားပွဲဖိတ်စာကရောက်လာပါတော့တယ်.
ကျွန်တော့်ရဲ့ဇနီးကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးထွက်မယ်လို့ လိမ်ပြီး ကျွန်တော် အဲ့ဒီကိုသွားခဲ့တယ်။
ပွဲပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရပ်ရွာက အိမ်နီးချင်း မိတ်ဆွေတွေကို နှုတ်ဆက်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်။
အိမ်နီးချင်းတွေ ၀ိုင်းပြောကြတာက အမေ သေပြီတဲ့လေ။ ကျွန်တော် မျက်ရည်တစက်တောင် မကျခဲ့ပါဘူး။
သူတို့က ကျွန်တော့်အတွက် အမေထားပေးခဲ့တဲ့ စာလေးတစောင်ကို ကျွန်တော့်ရဲ့လက်ထဲကို ထည့်ပေးကြတယ်။
အမေ့ရဲ့ အချစ်ဆုံးသားလေးရေ ..
သားလေးအကြောင်းကိုပဲ အမေ အမြဲတမ်း တွေးတောနေခဲ့တယ်။ အချိန်နဲ့အမျှပါပဲ သားလေးရယ်။
သားလေးရဲ့ သားသမီးတွေရှေ့မှာ အရှက်ရစေအောင် အမေ စင်ကာပူကို လိုက်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကိုလည်း အမေ တောင်းပန်ပါတယ် သားလေးရယ်။
သားလေးက မိတ်ဆုံစားပွဲကို လာမယ်လို့ အမေကြားတော့ အမေ ပျော်လိုက်တာ.
ဒါပေမယ့် သားလေးလာတာကို အမေမြင်နိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးသားလေး။
သားလေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသားလေးအတွက် အရှက်ရရမယ့် ကိစ္စကြီး အမေ့မှာ ရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကိုလည်း အမေ တောင်းပန်ပါတယ် သားလေးရယ်။
သားလေးသိရဲ့လား။ သားလေး ကလေးလေးဘ၀တုန်းကပေါ့သားရယ်။ မင်း မတော်တဆမှု တခု ဖြစ်ခဲ့ပြီး မျက်စိတဘက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ သားလေးရဲ့အမေဖြစ်တဲ့ အမေဟာ သားလေး မျက်လုံးတဖက်ထဲနဲ့ ကြီးပြင်း အရွယ်ရောက်လာမှာကို ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ရက်မှာလဲ။ ဒါကြောင့် သားလေးကို အမေ့ရဲ့ မျက်လုံးတဖက် ပေးခဲ့တာပါ။
သားလေးက အမေ့အစား အမေ့ရဲ့ မျက်လုံးတဖက်နဲ့ တကမ္ဘာလုံးကို မြင်နေနိုင်တာ ကြည့်နေနိုင်တာကို အမေ့မှာ ၀မ်းသာလုံးမဆုံးပါဘူး သားလေးရယ်။
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး.. မီးငယ် ဟိုကြည့် ဒီကြည့်လျှောက်ကြည့်ရင်းနဲ့က ရင်ထဲကို ရောက်သွားတဲ့ စာလေးမို့ ချက်ချင်းပဲ ဘာသာပြန်ပြီး တင်လိုက်ပါတယ်။ ဖတ်နေရင်းနဲ့လည်း အတွေး ဖြန့်ကျက်မိပြန်ပါတယ်။ ဘာလို့များ မိခင်ကို အဲ့ဒီလို ဆက်ခံခဲ့ရပါလိမ့်ပေါ့။ တော်တော်ဆိုးတဲ့ သားတယောက်အဖြစ် ခံစားလို့ ရလိုက်တယ်။ ဘ၀မှာ ဘယ်အရာမဆို ပြန်အစားထိုးလို့ ရပေမယ့် မိခင်ဆိုတဲ့ နေရာကိုတော့ ဘယ်လိုလူကိုမှ အစားထိုးလို့ မရပါဘူးလေ။ မိဘကို ရိုသေတဲ့နေရာမှာ မြန်မာလူမျိုးတွေကိုတော့ ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်လူမျိုးကမှ မယှဉ်နိုင်ပါဘူးလေ။ တကယ်တော့ မျက်လုံးတဖက်ထဲပါတာ ရှက်စရာမှ မဟုတ်ဘဲ။ ကလေးဘ၀မှာ ဘယ်လိုတွေ အရောင်ဆိုးခံခဲ့ရပါလိမ့်လို့လည်း တွေးမိတယ်။ မိခင်အနေနဲ့လည်း အလိုလိုက်ပုံ မှားယွင်းခဲ့ပုံ ရပါတယ်။ သားကို ချစ်ဖို့ပဲ တတ်ပြီး မချစ်တတ်တဲ့ မိခင်တယောက် ဖြစ်မှာပေါ့လေ။ ဘယ်လို မိခင်မျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် မိခင်ကတော့ မိခင်ပါပဲ။ သားသမီးကို ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အသွေးအသားတွေ ထုတ်ပေးရပါစေ။ ချစ်ကြပါတယ်။ ဒီလို စာပေမျိုးကို ဖတ်ရှုရတာ မိခင်ရဲ့ ချစ်မြတ်နိုးမှုကို လေးစားတဲ့စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာပေမယ့် မိဘကို စော်ကားတဲ့ သားသမီးတယောက်ကို မြင်ရတဲ့အတွက် ဒေါသဖြစ်မိပါတယ်။ တကယ့်အဖြစ်အပျက်လို့လည်း ဖော်ပြထားတာမို့ နောင်ကို ဒီလို တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေ ထပ်မံထွက်ပေါ်မလာပါစေနဲ့လို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆုတောင်းမိပါတယ်။
မူရင်း - http://jp.englishbaby.com/
Posted by မီးငယ် at 5:10 PM 1 comments
Labels: ဘာသာပြန်, အမေ
မူလတန်းကျောင်းတကျောင်းရဲ့ စာသင်ခန်းတခုထဲမှာ ဆရာမလေးတယောက်က စိတ်ပညာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဘာသာရပ်ကို ပို့ချဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ အတန်းစစချင်းပဲ သူက ကလေးတွေကို ပြောလိုက်တယ်။
ကလေးတို့ရေ .. မင်းတို့ထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသုံးမကျဘူးလို့ ထင်တဲ့သူ ရှိရင် မတ်တပ်ရပ်ပါ။
စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အထိ ဘယ်သူမှ လှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲ နောက်ဆုံးတော့ ဂျွန်နီ ဆိုတဲ့ ကလေးလေးက မတ်တပ်ရပ်လိုက်သတဲ့။
ဂျွန်နီလေးရေ .. ကလေးက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသုံးမကျဘူးလို့ ထင်တယ်ပေါ့ . ဟုတ်လား။
ဂျွန်နီလေးက ပြန်ဖြေလိုက်သတဲ့ .
မဟုတ်ပါဘူး ဆရာမ . တတန်းလုံးရဲ့ရှေ့မှာ ဆရာမ တယောက်ထဲ မတ်တပ်ရပ်နေတော့ အားနာလို့ပါ
Posted by မီးငယ် at 2:42 PM 1 comments
ရှင့်ရဲ့ရင်ထဲက နားလည်မှု ...
တခုခုတော့ လွဲနေခဲ့ပြီ ထင်ပါရဲ့ ...
နာကျင်မှုတွေ ပွေ့ပိုက်လို့ ..
ရှင်မြင်နေခဲ့တာ အပြုံးတခုတဲ့လား ..
တကယ်တော့ ကျွန်မ နာကျင်နေခဲ့တာလေ ..
တည့်တည့်ကို လွဲနေခဲ့တယ် ..
ကမ္ဘာကိုက ၂၃ ပိုင်းနဲ့ တခြမ်းတိတိ
၁ ဒီဂရီ ပိုစောင်းသွားရုံနဲ့တော့
ကျွန်မရဲ့ ခြေလှမ်းတွေ တိမ်းစောင်းမသွားနိုင်လောက်ပါဘူး..
Posted by မီးငယ် at 2:13 PM0comments
ကိုယ်ချစ်သလို ဘာလို့များ မချစ်နိုင်ကြပါလိမ့် ..
ကိုယ်မျက်ရည်ကျမိလောက်အောင်ခံစားနေခဲ့ချိန်မှာ
ချစ်ခြင်းကြောင့်ပဲ ပူလောင်ရပြန်ပီ ..
အားလုံးထဲမှာ နင့်ကိုငါ အချစ်ဆုံးပါ ..
လေ့ကျင့်ဦးမှ ဖြစ်မှာပါပဲ ...
( သူငယ်ချင်းလေးတစ်ယောက်အတွက်အမှတ်တရ )
Posted by မီးငယ် at 2:11 PM0comments
ဒါပေမယ့် .............................. .............
ငါ ဘာကြောင့်ပြုံးနေခဲ့တာလဲ ..
စွန့်လွှတ်ဖို့ကြိုးစားနေတတ်ခြဲ့ ပီ ......
( အိပ်မက်ကလေးတခုအတွက် )
Posted by မီးငယ် at 2:09 PM 1 comments
ဘယ်တုန်းကမှ ထပ်တူမကျခဲ့တဲ့ ကိုယ်
ကံကြမ္မာတခုကို လောင်းကြေးထပ်လိုက်ပြန်ပီ ..
ထပ်တူမကျခဲ့တာတော့ သေချာသလောက်ရှိလေ ရဲ့ ..
ဒါပေမယ့် မင်းမမြင်နိုင်ခဲ့ဘူး ..
ကိုယ် ရင်ထဲက ရှိုက်နေခဲ့တယ် ..
ဒါပေမယ့် မင်းမကြားနိုင်ခဲ့ဘူး ..
ကိုယ်ကပဲနားမလည်နိုင်ခဲ့တာ လား ...
၂၀၁၀ ရေ ..
လွမ်းတယ် ချစ်သူရေ ....
Posted by မီးငယ် at 2:08 PM0comments
ကိုယ့်ရင်နဲ့အမျှနာကျင်နေရ တာပါ ..
Posted by မီးငယ် at 2:07 PM0comments
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ ထိခိုက်ပြန်ပြီ ..။
ကံကြမ္မာကို လောင်းကြေးမထပ်ရဲတော့ဘူး.. .
ငါ လေ ...
Posted by မီးငယ် at 2:06 PM0comments
ညဉ့်သန်းခေါင်ရဲ့ တိတ်ဆိတ်မှုတွေကြား အိပ်မက်ကလေးတခု မက်နေခဲ့တယ်..
အိပ်မက်ကလေးကလေ သိပ်ကိုနူးညံ့လွန်းလှချည်ရဲ့ ...
ကိုယ့်ရဲ့ ပင်ပန်းနေတဲ့နေ့ရက်တွေကြား အိပ်စက်ချိန်တောင်နည်းလွန်းတဲ့ကိုယ်
အိပ်မက်ကလေးနဲ့ ဝေးကွာခဲ့ရတာ ကြာခဲ့ပေါ့ ...
ရုတ်တရက်ပါပဲ.................. .............................. .............................. .......
ညည်းတွားသံ သဲ့သဲ့လေးကြားလိုက်ရတယ် ..
ကိုယ့်နှလုံးသားလေး ... ငိုရှိုက်လို့ပါလား ..
ကိုယ် သည်းထန်စွာပဲ မိုးတွေရွာချပစ်လိုက်တယ် ..
ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကင်ကြည်လင်သွားေ လရဲ့ ...
အမျိုးမျိုးပဲ .. ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတယ် ...
ကြည်နူးခဲ့ရတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ နေ့လေးတနေ့
( နှစ်ခြိုက်စွာနဲ့ အိပ်မက်ကလေးထဲ အိပ်မောကျခဲ့ရတဲ့ နာရီပိုင်းလေးတခု )
Posted by မီးငယ် at 2:05 PM0comments
ကမ္ဘာဆုံးထိ လွင့်မြောသွားလေရဲ့ ..။
မ၀ံ့မရဲဖြစ်ခဲ့မိတာ အပြစ်တဲ့လား ..
နေနိုင်တဲ့ကျွန်မ ဖြစ်ရပြန်သတဲ့လားကွယ် ..
Posted by မီးငယ် at 2:02 PM0comments
အချစ်... မေတ္တာ ... သံယောဇဉ် ... တဲ့
ကျွန်မဘ၀မှာ အများကြီး တွေ့ခဲ့ရဖူးတယ်။
ချစ်တယ်လို့ တဖွဖွပြောနေပေမယ့် အတ္တသိပ်ကြီးတဲ့လူတွေ..။
မေတ္တာတရားနဲ့ အေးချမ်းနေစေမယ်လို့ ကြွေးကြော်ရင်းနဲ့ ပူလောင်မှုတွေကိုပေးနေတဲ့လူ တွေ ..။
သံယောဇဉ်တခုထဲနဲ့ အရာရာကို ရင်ဆိုင်လို့ စောင့်ရှောက်နေတဲ့ ချစ်တဲ့သူငယ်ချင်းလေးတွေ ..။
ကြာလာတော့လည်းလေ .. စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါနိုင်တဲ့ ဘ၀ကြီးမှာ...
ကျွန်မကြောင့် နာကျင်ခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေကိုလည်း တောင်းပန်ပါရဲ့....။
ကျွန်မကြောင့် ပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးတာတွေလည်း ရှိမယ်ထင်ပါရဲ့ ...။
အချစ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ... အမျိုးသားအမျိုးသမီး ချစ်သူ သမီးရည်းစား ချစ်ခြင်းမျိုး၊ သူငယ်ချင်း ညီအကို မောင်နှမ ချစ်ခြင်းမျိုး၊ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား ချစ်ခြင်းမျိုး၊ မိဘနဲ့ သားသမီး ချစ်ခြင်းမျိုး... အမျိုးမျိုးပါပဲ ...
ကျွန်မ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ လက်ခံခဲ့ဖူးသလို ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပြန်ပေးခဲ့ဖူးတ ယ် .....
အရိုးသားဆုံး ချစ်မြတ်နိုးခဲ့ဖူးသလို ဟန်ဆောင်မှုတွေလည်း ပြန်ရခဲ့ဖူးတယ် ..
ကျွန်မဘက်က အရိုးသားဆုံးနဲ့ ထားခဲ့ဖူးတဲ့ မေတ္တာတရားတွေအပေါ်မှာလည်း အစော်ကားခံခဲ့ရဖူးတယ်..။
ဘယ်လိုနာကျင်မှုမျိုးနဲ့ပဲ ကြုံတွေ့ရပါစေ.. တချိန်တခါလေးတော့ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာလေး ရခဲ့တဲ့အတွက် အဲ့ဒီလူရဲ့ ကောင်းကွက်ကလေးနဲ့ ပဲ ပြန်ဖြေသိမ့်လိုက်ပါတယ်။
မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ တစုံတစ်ယောက်ကို ထိခိုက်စေခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း သူ့ရင်ထဲက နာကျင်မှုထက် ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ နာကျင်ရတာ ပိုနေတာ နားလည်နေပြန်တော့ ဘယ်သူ့ကိုသနားရမယ်မသိ ..။
လောလောဆယ်ဒီရက်ပိုင်းတော့ ကျွန်မစိတ်တွေ တအားရှုပ်ထွေးနေလေရဲ့ ... ။
လောကကြီးနဲ့ အဆက်အသွယ် ဖြတ်ပြီး ခနလောက် နားလိုက်ရရင်တော့ စိတ်တွေ ပြေပျောက်သွားဦးမှာ...။
တစ်ယောက်ထဲနေခဲ့ဖူးတဲ့ တိတ်ဆိတ်မှုလေးတွေကနေ ပျော်ရွှင်တဲ့ဘ၀လေးတခုထဲ ၀င်ရောက်လာတယ်..။
ပျော်ရွှင်တဲ့ဘ၀လေးထဲမှာပဲ ကျွန်မ အမျိုးမျိုး ဖြစ်ပျက်ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ နောက်ပိုင်း ကျွန်မ မပျော်ရွှင်တော့ပြန်ဘူး..။
ပျော်ရွှင်မှုတွေချည်းပဲ အမြဲမပိုင်ဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ စကားက လက်တွေ့မှာ မှန်သလို ရှိပေမယ့် ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ နာကျင်မှုတွေက တော်တော်ကြာစွဲမြဲနေပြန်တော့ ကျွန်မ မှန်ကန်မှုတွေကို မုန်းလာပြန်တယ်..။
နွေးထွေးတဲ့ အသိုက်အ၀န်းလေးထဲမှာ .. ပြီးတော့ ကြင်နာမှုတွေကြားထဲမှာ ပျော်မွေ့နေတတ်ပီဖြစ်တဲ့ ကျွန်မ ...
အဆိပ်တွေပါနေခဲ့တာ သိတာတောင်မှ အဲ့ဒီအဆိပ်တွေကိုပဲ မက်မက်မောမော သောက်သုံးလို့ ...။
ကျွန်မ ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာကို စဉ်းစားရင်းနဲ့ ဘာမှကို မလုပ်ချင်တော့တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ပြင်းထန်လို့နေပြန်ရဲ့ ..။
တကယ်လို့များ အတိတ်ဘ၀က နာကျင်မှုတွေ ပါလာရမယ့်ကံ ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် ဒီဘ၀မှာ ဒီလောက်နဲ့ပဲ .......
Posted by မီးငယ် at 2:00 PM0comments
ကိုယ့်ရဲ့နေ့ရက်တွေမှာ မင်းအမြဲရှိနေခဲ့တယ် ။
ကြည်နူးနေခဲ့ရတယ် .. ။
ကိုယ်အိပ်စက်ပျော်ဝင်ခဲ့တယ်.. ။
Posted by မီးငယ် at 1:58 PM0comments
အကြင်နာတွေ ယုယမှုတွေ ချိုမြိန်မှုတွေကြား
ရဲရင့်တောက်ပနေပြန်ပြီလေ ... ။
ကျွန်မရဲ့ အိပ်မက်လို့ မပြောရဘူး ..
သိပ်ကို ပဟေဠိဆန်တတ်တယ် ..
လျှို့ဝှက်လွန်းတဲ့ အိပ်မက်လေးရယ် ...။
မင်းပေးတဲ့ခံစားချက်တွေကြားနိုးတ၀က်နဲ့ အိပ်ရေးတွေပျက်လို့ပေါ့.
Posted by မီးငယ် at 1:56 PM0comments
မင်းကိုယ့်ကိုစွဲလန်းစေခဲ့ တယ် ..။
ကိုယ့်ကို စွမ်းဆောင်နိုင်ကောင်းပါရဲ့  ...။
Posted by မီးငယ် at 1:54 PM0comments
Posted by မီးငယ် at 1:52 PM0comments
ဘ၀မှာ ဖြစ်သင့်တာအားလုံးကို ဦးစားပေးပြီး ကြိုးစားနေခဲ့တဲ့ကျွန်မ
ဖြစ်ချင်တာလေးတခုလောက်တော့ ဖြစ်ခွင့်ရချင်တယ် .
ကျွန်မအပေါ်မှာ နားအလည်နိုင်ဆုံးကလည်း ရှင်ဖြစ်သလို
ကျွန်မအပေါ်မှာ နားမလည်နိုင်ဆုံးကလည်း ရှင်ဖြစ်နေခဲ့တယ် .
ဘ၀ဆိုတာကို သတ်မှတ်ချက်တခုလို ပုံသွင်းထားခဲ့တဲ့ ကျွန်မ
ထင်မှတ်မထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဖြစ်လာတဲ့အခါ ...
ကိုယ်မရဘူးထင်ခဲ့တဲ့အချိန် မှာ အတင်းပေးခဲ့ကြတယ် ..
ကိုယ်ရပြီထင်တဲ့အချိန်မှာ အတုအယောင် ဖြစ်နေခဲ့ပြန်ရော ..
ပြုံးပြတယ်ထင်လို့ နှုတ်ဆက်လိုက်တယ် ..
ခပ်တည်တည်မျက်နှာလွှဲသွားကြ လေရဲ့ ..
ငိုကြွေးတယ်ထင်လို့ နှစ်သိမ့်ပေးခဲ့တယ် ..
မျက်ရည်တောင်မခြောက်သေးဘဲ ကန်ထွက်သွားကြပြန်တယ် ..
အားငယ်တယ်ထင်လို့ ပခုံးတဖက်ငှားလိုက်မိတယ် ..
အစွယ်ထက်တဲ့သွားတွေနဲ့ ကိုက်သွားကြလေရဲ့ ..
မေတ္တာတရားတွေ ဝေမျှခဲ့တယ် ..
ဘာဖြစ်လို့ခြေစုံကန်သွားကြ တာလဲ ...
ပြောပြန်ရင်လည်း နယူတန်ပဲ ခလုတ်တိုက်ရဦးမယ် ..
ငါ့အတွက်တော့ တဖက်စွန်းကျလားချည်လား ......
Posted by မီးငယ် at 1:47 PM0comments